Manahy ny tsy hisian’ny mangarahara izy ireo, ary milaza fa tsy hitondra fitoniana eto amin’ny firenena ny fifidianana izay ambarany fa notapahan’ny mpitondra io, araka ny baikon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Ahiana ny hampitombo ny savorovoro misy sy hiteraka korontana. Nanoratra sy nandefa taratasy any amin’ny filohan’ny CENI i Monja Roindefo, izay miangavy ity farany hanome alalana ny CPPA (Conseil des partis politiques Africains) na Filankevitry ny antoko politika Afrikanina ho anisan’ny mpanara-maso ny fifidianana. Nambarany fa matoa i Madagasikara mbola mahantra, tsy misy ny fandriampahalemana sy ny fahamarinan-toerana ara-politika, dia tsy mbola madio sy tsy mety madio ny fifidianana. Milaza ny handray anjara amin’ny fifidianana izay ho filoha anefa ny Monima, ka i Monja Roindefo no kandida hatosika amin’izany.